Ny olana mipetraka eto, dia tsy misy ny vola an-tanana hiasana, trésorerie, ny entana mety tsy misy mpividy intsony, na manao trosa avokoa ny client, satria izy koa misedra olana ohatran'ny rehetra ihany koa.
Mety tsy ilain'ny olona intsony koa ilay entana amidy na novokarina, satria samy mifehy fehikibo ny mpanjifa rehetra.
Mety tsy manana entana vatsiana ihany koa ireo fournisseur, na niakatra ny vidin'entana, na tsy nety hampanao trosa intsony ihany koa izy ireo fa mitaky ty sy 'nday amin'ny entana omeny.
1- Tsy maintsy ahena arak'izay tratra aloha ny fandaniana tsy ilaina rehetra, na izay azo ampandeferina, nefa tsy mahakasika loatra ny seham-pamokarana na ny qualité de production.
2- Ajanona ny livraison ho an'ireo client tsy mandoa vola, matetika manko tsy misy ny client, dia hoe zara aza mba misy maka ny entana na dia mandoa tsikelikely eo aza. Tsy banky ny asanao, ka ianao indray no amatsy vola (entana) ny client nao. Aleo lasan'ny concurrent-nao ny mauvais payeur. Aza malahelo izay client tsy mandoa vola, ny ainao efa an-tenda.
Takio daholo ny trosa.
3- Négocier ny fournisseur amin'ny payement, 30j fin du mois, izany hoe atambatra faran'ny volana ny fanefana ny entana alaina, ka manana 30 andro ianao amarotana ny entana, nefa ny client takianao tolo-botsotra. Tsy maintsy lava noho ny fetr'andro andoavanao ny fournisseur izany ny fetra andoavan'ny client. Mba ny volan'ny fournisseur no miasa hamatsianao ny client.
4 - Négocier ny banque na micro finance nindramam-bola. Angatao ny recapitalisation de la dette, izany hoe atambatra ireo renivola sy zanabola ary pénalité de retard rehetra, dia ampiana vola amboniny, dia iny no iaigana amin'ny kajy fanonerana vaovao.
- Ny ambim-bola tsy voaloa : 15 512 200ar
- Mbola misy 3 taona ny anonerana azy sisa
- Zanabola 21%/an = 21% x 15 512 200 x 3 (atao kajy tsotsotra, fa tokony latsak'izay raha dégressif linéaire ny fomba fikajiana, satria mihena isam-bolana ny capital restant à payer, dia iny capital restant iny no amerenana ny kajy volana manaraka) = 9 772 686ar
- Pénalité de retard 10% : 1 500 000ar ohatra
Nouveau capital à payer : 15 512 200ar + 9 772 686ar + 1 500 000ar = 26 784 886 ar
Dia io no iaingana vaovao.
Kajio ny filan'ny Orinasa, mbola mahazaka mamerina an'io vola io ao anatin'ny 5 taona vaovao ve.
Raha tsy misy tombony azo antenaina, dia amin'alahelo no ilazana hoe akatony ny Orinasa. Mangataka alalana amin'ny tribonaly misahana ny varotra (Tribunal de commerce) amaranana ny Orinasa, amafana ireo trosam-panjakana, ny trosan'ny banky rehetra, ny trosan'ny fournisseur.
Tandremo fa tsy voafafan'ny Tribunal de commerce ny garantie solidaire mety natao tamin'ny banky.
Fetsy matetika ny banky, rehefa mitrosa vola aminy ianao, dia asainy manao engagement personnel ilay tompon'ny Orinasa, izany hoe, ny fanananao manokana dia atao antoka miaraka amin'ny fananan'ny Orinasa, ka lasa trosanao amin'ny maha personne physique anao izany ny trosa nalainao amin'ny société personne morale.
Raha mahazaka ny fanefana ny trosa vaovao kosa ny asa fihariana, dia ampitomboy amin'ny vola ilaina ao anatin'ny 6 volana ampitrakana ny Orinasa ilay vola recapitalisé, dia iny no angatahana amin'ny banky ny andoavana azy ao anatin'ny 5 taona manaraka.
5- Manaova kajy tsotsotra, iza ny entana na vokatra mora kokoa ny famokarana azy, nefa tsara vidy, bonne rentabilité, dia iny no anompanana ny vola, fa ahena na ajanona izay produit be masokarena nefa kely tombom-barotra, ankoatran'ny produit d'appel, na entana manintona mpividy fotsiny, fa rehefa tonga ao indray izy dia mividy entana tsara vidy hafa.
6 Ahena ny isan'ny mpiasa, ka izay tena ilaina ihany no tazonina, mila manara-dalàna hatrany amin'ny fanajanonana mpiasa. Tandremana ny fanenana ny karaman'ny mpiasa, anontanio hatrany ny inspection de travail.
Ny tanjona izany dia ny hiverenana amin'ny Chiffre d'affaire, ahafahana mamerina ny rentabilité n'ny entreprise, ka ny vola miditra no ho betsaka noho ny vola mivoaka.
7- Mila miresaka amin'ny mpitaky hetra izay olana mitranga. Matetika moa raha impôt synthétique, na patente dia tsy te halala izy ireo fa dia rehefa tsy misy vola dia tsy omeny ny patente.
8- Azo atao ihany koa ny mangataka amin'ny Tribunal de commerce ny ampijanonana ny fakana ny entana natao antoka, saisie bancaire, ka mangataka aminy fepotoana andoavana ny trosa, mangataha 12-24 volana.
Tadidio fa raha trosa fournisseur no ahanton'ny tribonaly ny fandoavana azy, dia tsy amatsy entana anao intsony iny fournisseur iny, ka mila mahita fournisseur hafa izany, na voatery manao Ty sy 'Nday raha hividy entana aminy.
9- Mila mitandrina amin'ny fahasalamana, fa enjana eo ny asa saina, mila misakafo ara-dalàna, mila matory, ilaina ny fanohanan'ny vady aman-janaka eo. Matetika eo dia misy korontana ny ao an-tokatrano, satria mikorontana ny vola miditra sy ny fari-piainana nahazatra, ny ankizy tsy mandeha loisir sy vacances intsony, dia kotaba ny ao an-trano, ny sakafo sy fiainana ambony nahazatra nitontona, ny internet sy jiro ao an-trano mety tsy voaloa intsony, ny trano lehibe nofaina mety hialana.
Resao ny ankizy arakaraky ny taonany, fa na zaza aza izy ireo dia mahatsapa ny olana azavainao.